Ndị Ọrụ Ahịa na-elekọta mmadụ maka Marketeers | Martech Zone
Ọrụ ndị ahịa B IS ahịa. Aga m ekwu ya ọzọ… ọrụ ndị ahịa B IS ahịa. N'ihi na otu ị si emeso ndị ahịa gị ihe na-akwalite na mgbasa ozi mmekọrịta, ọkwa na nyocha kwa ụbọchị, ọrụ ndị ahịa gị abụghịzi ihe na-egosi afọ ojuju ndị ahịa, njigide ma ọ bụ uru. Ndị ahịa gị ugbu a bụ ogwe aka dị mkpa maka mbọ ahịa gị niile n'ihi na ha na-ekerịta ngwa ngwa n'ịntanetị.
Mgbe ndi otu ahia choro ime ka ndi mmadu mara ihe na ndu ndi ndu site na imeghari ihe omuma na imeputa aka ndi di nma, ndi otu ndi ahia na acho ime ka ndi mmadu nwee obi uto ma nwekwuo njide ndi ahia site na ige nti, na ịzaghachi ihe ndi ahia choro. Otu esi ahụta mmadụ abụọ a ka ihe ịma aka n’etiti ọtụtụ otu. Isi Iyi: Obi
Ezie na 60% nke ụlọ ọrụ kwenyere na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ọwa ahịa, ha na-eleghara njirimara nke akara ha anya ndị na-azụ ahịa na-akwado ma ọ bụ na-emebi iwu. Ihe niile ị na - ewe iji mebie ọnwa ma ọ bụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike iji mee ka ntụkwasị obi, ikike, yana njikọ mmetụta uche na ndị na - ege gị ntị na - ejizi otu mmemme nke ebipụtara ma kwalite na mgbasa ozi. Nwere ike ịgbake n'ụzọ dị irè… ma i kwesịghị ichefu na ahịa ọrụ is ugbu a obu ihe di mkpa na usoro ahia gi.
Tags: ntinyeakwadoNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaonye nkasi obinjigideịkwado mmekọrịta mmadụ na ibe yaọrụ ndị ahịa